यसकारण लगिँदैन महिलालाई मला’मी …. थाहा पाउनुहोस् - News 88 Post
June 29, 2021 September 7, 2021 N88LeaveaComment on यसकारण लगिँदैन महिलालाई मला’मी …. थाहा पाउनुहोस्
– भूत’को डर : म’सानघाटमा तड्पिए’र बसेका आत्माहरूको (भू’त) उपस्थिती हुन्छ भनेर विश्वास गरिन्थ्यो, गरिन्छ। यस्ता भूत’ले कमजोर हृदय भएका महिलाहरूलाई आ’क्रमण गरेर शरीरलाई अधीनमा लिन्छन् भन्ने पनि विश्वास गर्दै आइएको छ।
विशेष गरी कुमारी केटिहरूलाई यस्ता भू’तले बढि रुचाउने पनि विश्वा’स गरिन्छ। त्यसैले पनि म’सानघाटमा महिलाहरूलाई जान प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
घरबेटी छुटाउने जाने मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले साफसँग झपारेर र्‍याखर्‍याख ती पारे ! जवाफ आयो यस्ताे…
एक कप चियाकाे मूल्य १६ सय रूपैयाँ, के छ त्यस्ताे खास
संसारकै सबैभन्दा पुन्टे गाई ॐ लेखि शेर गर्नुहोस्